Umlilo kulingwa Crucibles zipakishwe ngendlela ubushushu baphathwe ikreyiti yeplanga, ukuqinisekisa ukunikezelwa olukhuselekileyo ukuya nkqu iindawo ezininzi robust.
A Uluhlu olupheleleyo crucibles imboni standard ziveliswa efektri yethu. Our on-site ivenkile Umatshini yenza sikwazi ukuvelisa crucibles imigaqo ngamnye ngexesha elifutshane.
ubukhulu Elungiselelweyo yi acceptable.Top ezisemgangathweni kunye nenkonzo lula usukelo lwethu.
Fire Uvavanyo Crucibles ube ngaphezu resistency eqhelekileyo ngokuhlaziya phantsi kweemeko kulingwa umlilo. crucibles zethu zisetyenziswa kwiilebhu lonke kwimarike yamazwe ngamazwe. Sinento ezahlukeneyo ezinokwakheka kuka kunye nobukhulu ezifumanekayo nokubonelela neenkcukacha ezifunekayo.
crucibles bethu ubomi elide, ngokukhawuleza ukunyibilika, isantya ukunyibilika rhoqo kunye nokumelana nengaqhelekanga utshintsho ubundlobongela lobushushu.
umba: Uvavanyo Fire Iziko
Facility: Automatic izixhobo udini
Ukuhambisa ngenqanawe: babelawula abaninzi, ixesha lonikezelo ngeenxa 5-10days. elwandle okanye umoya njenge agent isicelo
Delivery& Service: ezifika ukunikezelwa ngexesha ngalinye. Ukunika inkonzo enokuthenjwa nenoxanduva umxumi ngalinye imveliso nganye. zethu Baqonde ukuba anelise zonke umxumi ngenkonzo engcono.
L.O.I (ukulahlekelwa on ucinezelo) 0,21%